आजको राशिफल २०७८ साल असोज ७ गते बिहीबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल असोज ७ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर २३ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरद्ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्ण(पितृ) पक्षको द्वितीया तिथि विहान ६:०२ बजेसम्म, त्यसपछि तृतीया रहनेछ ।
मेष : आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ । रोकिएका काम कार्यले स्थान पाउने छन् भने ठूला व्यक्तिको संगत गर्न पाइनेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । पढाइमा रुचि बढ्ने देखिन्छ ।
वृष : व्यर्थको कार्यमा समय वित्दा महत्वपूर्ण कार्य व्यवारिसे बन्नेछ । सतर्क रहनु होला । स्वास्थ्य कमजोर एवं आम्दानी भन्दा खर्चभार ज्यादा हुँदा तालमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् ।
मिथुन : अघिदेखि रोकिएका वित्तिय कारोवारलाई अघि बढाउन सकिनेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँगको यात्रा हुनेछ । आय मूलक कार्यमा ध्यान जानेछ । गरेका कार्य सफल हुनेछन् भने नयाँ प्रस्तावहरु समेत आउने छन् ।
कर्कट : पिता एवं गुरुजनको साथ मिल्नेछ । नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । मान्यजनको सहयोग मिल्दा असंभव कार्य पनि सहज तवरले बन्ने छन् । प्रतिक्षित नतिजामा सफलता मिल्दा खुसी लाग्नेछ ।
सिंह : सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ । सामान्य झन्झट एवं समस्यामा आत्तिएर कार्य नछाड्नु होला । बुद्धिमता ढंगले अघि बढ्दा सफल भइनेछ । परोपकारी कार्यमा मन जानेछ । आध्यात्मिक चिन्तन रहनेछ ।
कन्या : क्षणिक फाइदालाई हेर्दा महत्वपूर्ण अवसर फुत्कनेछ । काम गरेर जस भन्दा अपजसको सामना गर्नु पर्दा दिक्क लाग्नेछ । कडा परिश्रम गरेता पनि थोरै प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । असन्तोषी प्रबृत्ति रहनेछ ।
तुला : तपाईँको कार्य गर्ने शैलीको प्रशंसा हुनेछ । काम बन्नेछ । प्रेमीप्रेमीका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ । मानसिक शान्तिको अनुभव हुनेछ । अरु व्यक्तिलाई विश्वास दिलाउन सक्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइनेछ ।
बृश्चिक : सामान्य झमेलाका बापजुध पनि विशेष कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्षमा सुधारको संकेत देखिन्छ । अग्रज व्यक्तिको सरसहयोगले कार्य गर्न सहज हुनेछ । खुसीयालीको वातावरण रहला ।
धनु : शारीरिक स्फूर्तिको अनुभूति हुनेछ । बन्धबान्धवसँग टाढिएको सम्बन्धमा निकटपन आउनेछ । थालेका काम कार्य एकाएक पूरा हुँदा, हौसला बढ्नेछ । मांगलिक कार्यमा सहभागि भइनेछ । दिन हर्षाेल्लास पूर्वक वित्नेछ ।
मकर : विना तयारी कार्यमा लाग्दा अन्योलको वातावरण बन्नेछ ।कठोर बोलिका कारण विवादमा परिनेछ । स्थानान्तरणको समस्याले सताउनेछ । घरायसी समस्या सृजना हुनेछ । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ ।
कुम्भ : थालेका कार्यबाट दिगो रुपमा लाभ लिन पाइनेछ । सहयोगीको साथ समर्थनले गर्दा थालेका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । नयाँ आर्थिक लगानिको अवसर मिल्ने देखिन्छ ।
मीन : दूरदर्शी सोचाइ रहनेछ । धैर्यताका साथ कार्यलाई अघि बढाउँदा सफल भइनेछ । धन संचय गर्ने वातावरण बन्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि जाग्नेछ । सुखसुविस्ताका साधन जुट्नेछन् । अल्छिपना त्यागेर अघि बढ्नुहोला ।